Kulan ku saabsan Adkeynta Amaanka oo maanta ka dhacay Bosaaso+Sawiro – SBC
Kulan ku saabsan Adkeynta Amaanka oo maanta ka dhacay Bosaaso+Sawiro
Posted by Webmaster on May 15, 2012 Comments
Kulan oo si heer sare ah loosoo agaasimay ayaa waxaa loogaga hadlayeey xoojinta amaanka Magaalo Ganacsiga Puntland ee Bosaaso waxaana uu kadhacay xarunta Dowada hoose ee magalada Bosaaso.
Kulanka xoojinta aminga Bosaaso looga hadlayey waxaa ka sooqeybgalay masuuliyin Kasocota Wasaarada Amiga Putland, Maamulka gobolka Bari, iyo kan Dagmada Bosaaso, Xldhibaano, Nabadoono , iyo Masuuliyiinta Lix iyo Tobaka Xafadood ee Bosaaso iyo waliba uruurada haweenka.
Waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Masuuliyiin ka socda Lix iyo Tobanka Xaafadood ee Magalada Bosaaso iyagoo Balan Qaaday in ay Lashaqeynayaan Ciidamada Amniga si amaanka loo sugo.
Sidoo Kale Kulankaasi waxaa Kahadlay Duqa Magalada Bosaaso Xasan Cabdale Xasan oo sheegay Ahmiyada ay leedahay Wada Shaqeynta Dhexmarta Gudiga Xafadaha Bosaaso iyo Ciidamka Aminga.
intii uu kulanka socday waxaa khudbado dhaa dheer ka jeediyeey uu Masuuliyiin uu ka mid ahaa Barkhad Cali Saalax oo ah Xubin ka tirsan Gudiga Dastuurka Puntland oo sheegay in ay Shacabku ay wax walba Kaga qeybqadankaraan Aminga.
Waxaa kaloo Kulanka ka hadlay Gudoomiyaha gobalka Bari Cabdi Samad Maxamed Galan oo ugu baaqay Shacabka ku dhaqan gobolka Bari Gar ahaan dagmada Bosaaso in ay xoojiyaan sidii ay uga qeybqadan laheeyeen Nabadgalyada degmada Bosaaso.
Kulankan ayaa waxaa iyagana ka hadlay Nabadoonada gobalka Bari oo iyagana Shacabka Kuladardaarmay in ay Qeyb weyn kaqataan Xoojinta Aminiga ,Sidoo kale Qaarkamid ah Haweenkii kulankaasi kaqeybgalay ayaa halkaasi Kajeediyeey Buraan buro kahadlay Fa, idadu ay Nabadu leedahay.
Ugudambeyntii kulankaasi waxaa soo xiray Wasiir kuxigeenka Amniga Puntland C/risaaq Xareed oo isagoo hadalkiisa ku Dheeraday oo sheegay in ay Reer Bosaaso ay iyagu ay inta badan Masuul kayihiin wixii kadhacay Bosaaso Sababna uga dhigay in shacabku Aywaxa walba ay Qabankaraan.